32 qof oo Soomaali ah oo lagu dilay dalka Ethiopia (Yaa ka dambeeyey?) – Xeernews24
32 qof oo Soomaali ah oo lagu dilay dalka Ethiopia (Yaa ka dambeeyey?)
13. September 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Ugu yaraan 32 qof oo Soomaali ah ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen weerar Ciidamo ka tirsan dowlad degaanka Oramada ee dalka Itoobiya ay ku qaadeen degaanka Hawadaay oo ka tirsan dhulka Oromada Itoobiya.
Dadka Soomaalida ah ee halkaasi lagu dilay ayaa la sheegay in ay ahaayeen dad Ganacsato ah oo degaankaasi kunoolaa sanadyadii lasoo dhaafay, waxaana lagu aasay meydadkooda badankood magaalada Jig-Jiga.
Dadka degaanka ayaa sheegay in dilkaasi ay geysteen ciidamada Oramada, islamarkaana ay ka xanaaqsanaayeen dad Oromo ah oo horay loogu dilay dhulka Soomaalida ee ku yaalla dalka Itoobiya.
Dowladda Itoobiya ayaa sheegeysa in odayaal dhaqameedyada labada dhinac ay kala kaashaneyso xallinta khilaafaadka u dhaxeeya. Goobjooge ayaa sheegay in ciidamo milatariga ka tirsan ay haatan ilaalinayaan waddooyinka magaalada ay isku dhacyadu saameeyeen.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/09/oromia-arme.jpg 168 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-09-13 23:27:472017-09-13 23:27:4732 qof oo Soomaali ah oo lagu dilay dalka Ethiopia (Yaa ka dambeeyey?)
DAAWO:-Turkiga Oo Iibsatay Gantaalaha Difaaca Ee S 400 ( Xogta Dahsoon ) Waa tuma Halimah Yacob? Gabadhii ugu horeysay ee madaxweyne ka noqota dalka...